बालबालिकामा पनि बढ्दै संक्रमण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
संक्रमित बालबालिकाको संख्या उच्च रहे पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा धेरै जटिलता भने छैन ।
माघ ६, २०७८ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै बालबालिकामा अत्यधिक मात्रामा संक्रमण देखिन थालेको छ । खोपको दायराभन्दा बााहिर रहेका १२ वर्षमुनिका बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएको छ ।
संक्रमित बालबालिकाको संख्या उच्च रहे पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा धेरै जटिलता भने छैन । तर, दोस्रो लहरका बेला जस्तै कोभिडबाट निको भइसकेका धेरै बालबालिकामा एक–डेढ महिनापछि ‘पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम’ लक्षण देखिन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार विशेष गरी १२ वर्षमुनिका बालबालिकामा त्यस्तो जोखिम बढी देखिन्छ । किनकि यो उमेर समूहले खोपसमेत लगाएको छैन ।
सरकारले करिब दुई महिनाअघि मात्र १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहलाई फाइजर खोप दिइएको छ । चिकित्सकहरूका १२ वर्षमुनिका धेरैजसोमा अत्यधिक जीउ दुखाइ, ज्वरो, रुघाखोकी, घाँटी दुख्ने, खसखस गर्ने, कसै–कसैमा टाउको दुखाइ, हल्का बान्ता हुने र पखालालगायतका लक्षण देखिएको छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका बाल रोग विभाग प्रमुख डा. प्रकाश पौडेलले बालबालिकामा संक्रमण अत्यधिक देखिएको र ज्यानै जोखिममा नपरे पनि उनीहरूलाई शारीरिक पीडा भएको बताए । पौडेलका अनुसार प्रतिष्ठानको बहिरंग विभागमा आउने लक्षण भएका ११ वर्षमुनिका बालबालिकाको परीक्षण गर्दा करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा कोभिड देखिएको छ । परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने संक्रमण पाँच गुणा बढी देखिने उनी बताउँछन् ।
परिवारमा वयस्क सदस्य संक्रमित भएको अवस्थामा बालबालिकालाई बेग्लै राख्न सम्भव नहुने हुँदा वास्तविक संक्रमित निकै धेरै हुन सक्ने डा. पौडेलको भनाइ छ । बालबालिकाले आफ्नो समस्या प्रस्टसँग भन्न नसक्ने हुँदा स्वास्थ्यमा जटिलता देखिने जोखिम अत्यधिक रहन्छ । अघिल्ला लहरमा जस्तो यस पटक गम्भीर समस्या विरलै देखिएकाले पनि परीक्षण कम भइरहेको हुन सक्ने डा. पौडेलको आकलन छ । ‘हामीले भने पनि परीक्षण धेरैजसोले गराउँदैनन्, यसपालि निमोनिया जस्तो धेरै गम्भीर अवस्था नदेखिएकाले परीक्षण नगराएका हुन् कि ?’ उनले भने ।
मुलुकको एक मात्र केन्द्रीयस्तरको कान्ति बाल अस्पतालमा समेत डेढ सातादेखि कोभिड जस्तो लक्षण लिएर आउने बालबालिकाको संख्यामा वृद्घि भएको छ । हाल कोभिड संक्रमित १२ बालबालिकाको उपचार भइरहेको कान्तिका निर्देशक डा. अजित रायमाझीले बताए । ‘तेस्रो लहरमा हालसम्म एक जना पनि भेन्टिलेटरमा छैनन् तर पछिल्लो दिनमा कोभिड संक्रमित बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि भएको छ,’ उनले भने ।
धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिसिन विभाग प्रमुख डा. शेरबहादुर कमर दोस्रो लहरको दाँजोमा अहिले बालबालिकामा पनि संक्रमण बढेको बताउँछन् । ‘लक्षण देखिएका बालबालिकाको परीक्षण गर्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको छ,’ उनले भने । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार कोभिडले १२ वर्षमुनिका बालबालिकामा हनहन्ती ज्वरो आउने, जीउ र घाँटी दुख्ने, पखालालगायतका लक्षण देखिएको छ । ‘१२ वर्षमुनिका बालबालिकाले खोप नपाएकाले अलि बढी पीडादायक संक्रमण देखिएको हो,’ उनले भने ।
कोभिडको लक्षण लिएर पुग्ने बिरामीको संख्या बढे पनि गम्भीर अवस्थाका नरहेको कान्ति बाल अस्पतालका डा. रामहरि चापागाईंले बताए । ‘भर्ना हुनेहरूमा दोस्रो लहर जस्तो श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने, निमोनिया देखिने, अक्सिजन दिनुपर्ने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था धेरैमा छैन,’ उनले भने । तर, उनी संक्रमितको संख्याभन्दा पनि दोस्रो लहरमा जस्तै पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम देखिने हो कि भनेर बढी सचेत रहनुपर्ने बताउँछन् ।
प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०८:१५
रौतहट — एमाले रौतहटमा नेतृत्व चयनको विषयमा विवाद चुलिएको छ । ९ औं जिल्ला अधिवेशनमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भए पनि लोकतान्त्रिक विधिअनुसार निर्वाचन नभएसम्म साबिक जिल्ला कमिटी मौजुदा रहेको पूर्वअध्यक्षसहितको भेलाले निर्णय गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।
अधिवेशनबाट निर्विरोधको प्रक्रिया गलत भएको भन्दै निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष तुलसीराज गिरीले तुल्सीलाल अमात्य सभा भवन गरुडामा छुट्टै भेलाको आयोजना गरेका छन् । गिरीले गत माघ २ मा कटहरिया नगरपालिकामा सम्पन्न अधिवेशनमा अध्यक्ष मण्डलले प्रस्तावित गरेको कमिटीलाई बन्दसत्रको हलले पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेको दाबी गर्दै साबिककै जिल्ला कमिटीलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन् । ‘निविरोधको प्रक्रिया नै गलत छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रणालीबाट जानुपर्नेमा एकलौटी ढंगबाट कमिटीको नाम पढियो । यो मान्य हुँदैन ।’
जिल्ला अधिवेशन एमाले केन्द्रीय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले अधिवेशन उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि बन्द सत्रमा अध्यक्ष मण्डलले गरेको निर्णय मान्य हुने सहमति भएअनुसार पार्टीको जिल्ला अध्यक्षमा त्रिभुवन साह चयन भएका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष उपेन्द्र साहले बताए ।
‘बन्द सत्रको हलले म्यान्डेट दिएपछि अध्यक्षमा साहको नाम चयन भएको हो । यसमा विधिविधान सम्मत भएको मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘छलफल र सहमतिअनुसार सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन भएको हो । अब साबिकको कमिटी रहँदैन ।’ निविरोध निर्वाचित भएका साह एमाले नेता प्रभु साहनिकट हुन् ।
प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०८:१३